Otu esi Ewelite àgwà àgwà ALT - Atụmatụ Semalt
Ụfọdụ webmasters na-ekpuchi foto ndị a site n'ịgụ aha na nkwupụta robots.txt, ebe ndị ọzọ anaghị edebanye ihe oyiyi nke ngwaahịa na ọrụ ha na àgwà ALT. Ndị ọzọ webmasters na-eji njirimara ALT na-enweghị ncheta, dịka okwu okwu na nkebi ahịrịokwu ma ọ bụ tinye okwu ahụ "oyiyi" na Alt Text. Dịka onye na-webmaster, ị kwesịrị iji ezigbo àgwà Alt - rent dedicated server canada.
Frank Abagnale, Semalt Onye ọrụ na-ahụ maka ndị ahịa, kwuru na mgbe ị na-achọ ihe oyiyi, ị ga-ahụ ụfọdụ foto gị na nchọta ọchụchọ Google. Mana nke ahụ ga-ekwe omume mgbe ịmechara foto gị maka SEO. Mgbe mmadụ na - achọ okwu ma ọ bụ ahịrịokwu ụfọdụ, a ga - eduzi ya na ebe nrụọrụ weebụ gị.
Debe ihe osise gị maka nbido nke mbụ:
Ihe mbụ ị ga-echeta bụ otu esi agwa Google, Bing, na Yahoo gbasara ụdị oyiyi gị. A na-eji ihe oyiyi Alt na akwụkwọ XHTML na HTML maka ịkọ ederede alt (ederede ọzọ) nke ga-enyeghachi mgbe a na-apụghị ịsụgharị ihe ndị e ji mee ihe.
Site na ihe atụ ndị dị n'okpuru ebe a, ka anyị lelee otu esi edepụta àgwà elu maka foto gị:
"Foto 1" - ọ bụ ihe na-abaghị uru ma ọ bụghị nkọwa. Enweghị akwukwọ bara uru ma na-enye nkọwa maka ihe ọjọọ dị njọ maka ihe oyiyi ederede.
"Nwata nwoke na - azụ azụ" - ọ bụ nkọwa dị mma maka onyinyo gị, ma ọ bụghị ihe kwesịrị ekwesị maka weebụsaịtị weebụ.
Olee otú ị ga - esi mepụta àgwà zuru okè maka ihe oyiyi gị?
Nke a bụ ụkpụrụ ise nke edepụta àgwà kwesịrị ekwesị maka ihe oyiyi gị:
1. Nkọwa ngwa ngwa ma bara uru nke foto gị:
Ọ bụrụ na nkọwa nke foto gị adabaghị na ọdịnaya ya, oyiyi ahụ agaghị enweta ikikere ọ bụla site na ọchụchọ ahụ..N'ụzọ dị nro, WordPress na usoro nchịkọta ọdịnaya ndị ọzọ na-ebunye elu àgwà ndị na-akpaghị aka. Ma, ị ga-enyocha ngalaba a mgbe ị na-ebipụta foto gị na weebụsaịtị.
2. Ogologo ogologo nke elu àgwà:
Ogologo ogologo nke àgwà gị dị elu ga-abụ okwu atọ ma ọ bụ anọ kama ọ bụghị ogologo karịa mkpụrụedemede 200. Ọ bụrụ na ị na-eji ihe na-erughị atọ, ọ ga-esiri gị ike ịkọwa onyinyo gị. Maka mkpokọta elu, Google, Bing, na Yahoo tụlere mkpụrụedemede 255 nke àgwà ndị dị elu ka ha ghọta foto gị.
3. Jiri isiokwu mbu n'ime ihe oyiyi gi dị elu:
Dị ka nkụnye eji isi mee (H1, H2, H3, H4, na H5) na mkpado aha, ị ga-eji isiokwu mbụ n'ime ihe oyiyi nke elu foto gị. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, anyị nwere ike ịsị na àgwà elu ahụ aghaghị ịnweta ozi bara uru, na - eme ka ọ dịrị gị mfe ịkwalite ọdịnaya ahụ.
4. Adịghị spam:
Nkọwapụta na nke kachasị mma kachasị mma ga-eme ka ị nweta iwu site n'aka Yahoo, Bing, na Google. Ya mere, ị kwesịrị ịtinye akara okwu ma ọ bụ ahịrịokwu kwesịrị ekwesị na mkpụrụedemede elu ma belata nọmba ha ruo atọ na ise. Ịkwesighi iji okwu ndị dị ka "online," "ọnụahịa," "ịzụta," "onyinyo," na "weebụsaịtị" na njirimara gị.
5. Edela àgwà dị elu maka foto ndị a chọrọ mma:
Ọ bụrụ na ebe nrụọrụ weebụ gị nwere ọtụtụ ihe eji achọ nlezianya, ọ dịghị mkpa ka ị dee àgwà ndị dị elu maka ihe oyiyi ndị ahụ. E wezụga nke ahụ, ihe oyiyi akụ, bọtịnụ, okpokolo agba, anụmanụ, nnụnụ, na ọdịdị dị mma ịhapụ n'efu.
Ọ bụrụ na ị nwere ọtụtụ ebe nrụọrụ weebụ, ị gaghị elelị uru àgwà elu na ihe oyiyi dị elu dị. Ma ị na-agbakwunye ngwaahịa ọhụrụ gị na ụlọ ahịa gị ma ọ bụ dee post post, ị ghaghị ịkwado oyiyi ahụ n'ụzọ kwesịrị ekwesị na n'ụzọ kwesịrị ekwesị.